Sunday January 14, 2018 - 10:28:52 in Wararka by Super Admin
Baraha Bulshada sida Facebook iyo Twitter ayaa si aad ah layskula dhax qaaday sawirrada ay warbaahinta Dowladda ka xadday Websiteyada islaamiga ah iyadoo ka dhigaysay sawirro cusub oo ah saldhigga Alshabaab ee deegaanka Leego.
Kumanaan qof Soomaali ah oo saxafiyiin ay kamid yihiin ayaa si aad warkan fadeexadda ku ah DF-ka ufaafiyay, hadal heynta iyo doodda ayaa sii kululaaday kadib markii SomaliMeMo ay keentay asalka sawirrada dowladdu ku sheegtay Howlgal lagu burburiyay saldhiggii Al Shabaab ee Leego.
Saacado kadib ayay Idaacadda Afka dowladda ku hadasha waxay ku qasbanaatay in ay tirtirto oo website-ka rasmiga ah ka masaxdo warkii sheegashada beenta ahaa arrintaas oo banaanka soo dhigaysay sida ay ugu hungoobeen warkii beenta ahaa oo isku bedelay Fadeexo warbaahineed.
Warbaahinta DF-ka waa hore ayay sumcaddu uga dhimatay balse arrinta cusub ayaa aheyd in Xagasha warka beenta ah ay galeen qudheedo ay aheyd Waji gabax sababtoo ah mid kamida sawirrada waxaa ka muuqday khalfiyadda xeebta degmada Baraawe iyadoo la ogyahay in deegaanka Leego uusan u dhaweyn Badda.
inkastoo ay hawada ka saareen warkii sawirrada beenta ah watay hadane sidaas ceebtu uga harine goor hore ayaan ka keydinay wixii ay soo mad madoobeeyeen, howladeenadeenna ayaa markale umadda usoo bandhigayo qoraallkii iyo sawirradii uu Radio Muqdisho faafiyay kadibna uu tiray.
Halkan ka Daalaco Video ama Hoos Ka Eeg